Ukunciphisa Ukunyamezeleka kwengqondo - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya Resources Ukunyamezela kwengqondo Ukunciphisa
Iingcinga asizizo thina. Ziyatshintsha kwaye zinamandla. Singabalawula; akukho mfuneko yokuba basilawule. Zihlala ziba yimikhwa yokucinga kodwa singazitshintsha ukuba azizisi uxolo kunye nolwaneliseko xa sizazi. Iingcinga zinamandla kuba zitshintsha uhlobo lwee-neurochemicals esizivelisayo kwingqondo yethu kwaye, ekuhambeni kwexesha nokuphindaphinda okwaneleyo, kunokuchaphazela ubume bayo. Ukuqiqa yindlela entle yokusenza ukuba sazi aba baqhubi beemvakalelo banokuqonda kunye nendlela abaziphembelela ngayo iimvakalelo zethu kunye neemvakalelo zethu. Singathatha ulawulo kwakhona.
ISikole sezoLimo saseHarvard isifundo wabonisa ezi zilandelayo iziphumo apho izifundo ziye zenza umyinge we-27 imizuzu yokusebenzisa ingqondo ngosuku:
• Iimpawu ze-MRI zibonise ukunciphisa umbandela (iisensi zesisindo) kwi-amygdala (uxhala)
• Ukunyuka kwemigca kwi-hippocampus - imemori nokufunda
• Ivelise iingeniso zengqondo eziqhubekayo kulo lonke usuku
• Ukunciphisa ukunciphisa uxinzelelo
Zama ukurekhoda kwethu okukhululekile
Sebenzisa yethu yokuzilahla ngokukhululekile ukukunceda uphumule uze uvuselele ubuchopho bakho. Ngokunciphisa ukuveliswa kweengxaki ze-neurochemicals, uvumela umzimba wakho ukuba uphilise kwaye ingqondo yakho isebenzise amandla okuqonda kunye neengcamango ezintsha.
Lo wokuqala ungaphantsi kwemizuzu eyi-3 kwaye uya kukuthabathela elwandle. Iphucula ngokukhawuleza isimo sengqondo.
Eli sesibini liya kukunceda ukukhulula uxinzelelo kwimisipha yakho. Kuthatha malunga nemizuzu ye-22.37 kodwa unokuziva ngathi nje yi-5.
Lo wesithathu ukhulula ingqondo ngaphandle kokubonisa nayiphi na impawu yokunyakaza ukuze uyenze kwisitimela okanye xa abanye bekhona. Igcina imizuzu ye-18.13.
Le sesine yimizuzu eyi-16.15 ubude kwaye ikuthatha uhambo lomlingo efwini. Ukuphumla kakhulu.
Ukucamngca kwethu kokugqibela kudlulileyo ngaphezu kweminye imizuzu ye-8 kwaye kukunceda ubone izinto ofuna ukuzifezekisa ebomini bakho.
Kukulungele ukwenza umsebenzi okhululekileyo wokuziphucula umcimbi wokuqala ekuseni okanye kusasa. Shiya okungenani iyure emva kokutya okanye ukwenze ngaphambi kokutya ukuze inkqubo yokugaya ingaphazamise ukuphumla kwakho. Ngokuqhelekileyo ukulungele ukwenza oko uhlezi esihlalweni esihlalweni kunye nomlenze wakho ngqo kodwa abanye abantu bayathanda ukuyenza phantsi. Umngcipheko wodwa kuphela kukuba unokulala. Ufuna ukuhlala uqaphele ukuze ukhulule iingcinga ezixinzelelekileyo. Akuyi-hypnosis, uhlala ulawulo.
Nazi ezinye ngqondweni ukucamngca kwi-BBC.
<< I-TRF iphuhlisa izixhobo Iincwadi ezikhuthazwayo >>